Dhaleeceeyn la xiriirta dhallaanka lagau xiro ruumka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawir: Emil Häggbom, Pasi Winsten oo labaduba ruumka galey iyaga oo aan qaan-gaarin.
Dhaleeceeyn la xiriirta dhallaanka lagau xiro ruumka
In la xeereeyo in aan dhallaanka lagu hayn karin ruumka wax ka badan 24 saacadood
La cusbooneeyay tisdag 19 mars 2013 kl 12.46
La daabacay tisdag 19 mars 2013 kl 09.42
Waxaa kor u sii kacaysa tirada dhallaanka ruumka la geliyo ee da'doodu u dhexeeyso 15 illaa 17 jir inta maxkamad laga hor-keeneyo.
Halka qaar badan ee dhallaankaasi ka mid ahina la saaro xadeeyn, waana mid uu xeerku qabo in laga gaabsado intii la awoodo. Tallaabooyinkaa ayaa dhanka kale burineya xeerka caalamiga ee xuquuqda dhallaanka, sida lagu sheegay baaritaan ka soo baxay hayadda ilaalinta xuquuqda dhallaanka oo afka iswiidhishka lagu yiraahdo: barnombudsmannen - BO.
Hayadda BO ayaa sidoo kale maanta u gudbin doonta dawladda war-bixin ay amuurtaa ka soo sameeysay iyadoona lagu codsaneyo in la dhimo xilliga ruumka lagu hayo dhallaanka aan qaan-gaarin.
Pasi Winsten ayaa galay ruumka isaga oo 17-jir ah, laguna soo eedeeyey fal ah inuu dab wax ku dilay:
- 10 daqiiqo oo ruumka lagu jiro ayaa u dhiganta saacad iyo wax ka badan. Waa meel lagu waasho, sida uu sheegay.
Pasi Winsten oo iminka da'diisu tahay 23 jir ayaa sheegay inay aad iyo aad ugu adag tahay inuu dareenkiisa ka muujiyo muddadii uu ruumka ku jiray, isagoona ku jiray qol yar oo takoor ah. Winsten ayaa ruumka ku jiray laba maalmood intii aan oodda laga qaadin. Sidii dhallaan 17-jir ah wax badan lagalama socodo xeerarka, waxaana wanaag-sanaan lahayd in la helo hab kale oo loo howl-geli karo, sida uu sheegay.
– Waxaa wanaag-sanaan lahayd in wax un la qabto, la ciyaaro biingis (pings) oo kale ama dibadda la socsocdo. Waxaan qabaa in da’da inta aan la qaan-gaarin ay tahay mid lagu jiro da’ yar in ruumka la galo, iyo garaadka dhallaanku aannu xamili karin middaa, sida uu sheegay Pasi Winsten.
Iswiidhen ayey ku dhaleeceeyeen guddiga talada Yurub iyo hayadda caalamiga ee qarammada midoobey guddigeeda jir-dilku falalka la xiriira in dhallaanka laga xayuubiyo xoriyaddooda, waa dhallaanka aan gaarin da’dii qaan-gaarka.
Hayadda BO oo muddo sanooyin ah isku dayaysay sidii su’aashaa miiska loo saari lahaa ayaa iminka soo saartey war-bixin ay dawladda u gudbisay maanta oo tilmaamaya waxyaalo ey ka mid yihiin baahida loo qabo war-bixin la xiriirta xoriyadda laga xayuubiyo dhallaanka. Howlo la xiriira aqoon-darro heysa shaqaalaha ka howl-gala ruumamka iyo tira-koob-darrada dhallaanka ruumka la dhigo ee da’doodu u dhaxeeyso 15 illaa iyo 17-jir.
Foomam ay hayadda BO u dirtay badankood maamullada ciidanka ammaanka ayaa caddeeyey in xoriyaddooda laga xayuubiyey dhallaan 3 100 jeer sannadkii 2011, iyadoona aan la heyn tira-koob loo barbar-dhigo. Waan tiro kor u sii kacaysa, sida uu sheegay madaxa BO Fredrik Malmberg.
– Waa tiro saddex jibbaarantay muddo 15 sannadood gudahood ah, laga bilaabo 40 illaa iyo 120 sida ay iminka tahay. Wa tiro aad kor ugu kacday, iyadoona haddii la eego tira-koobka ka hor-tagga dembiyada muddo u dhiganta aan la sheegi karin sababaha ugu wacan, sida uu sheegay.
– Guddida baarlamaanka ee caddaaladda oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno JO (afar qof oo ka tirsan baarlamaanka oo looga dacwoodo haddii dadku ay caddalad darro ka tirsadaan he'yad ama qof sarkaal ah) oo eegmo ku sameeyay arrinkan ayaa sheegay in lagu tallaab-san karo falalka ah in dhallaan xoriyadda laga xayuubiyo oo keliya kolka xaaladdu tahay mid aan caadi ahayn, sida uu sheegay Fredrik Malmberg.
Hayadda BO ayaa iminka soo jeedisay fikirro ey ka mid yihiin in loo dhaqmo sida xeerku yahay dalka Noorway oo aan dhallaanka laga qaadi karin xoriyaddooda ugu badnaan 24 saacadood, halka ay dalkan Iswiidhen ka tahay afar maalmood.
Sida ay sheegtay hayadda xeer-ilaaliyeyaashau in 15 ruux oo dad’doodu u dhexeeyso 15 illaa iyo 17 sannadood ey ruumka ku jireen sannadkii ina dhaafay muddo 60 maalmood ka badan. Halka lix dhallaankaasi ka mid ahi lagu soo rogey xanibaadyo.
Emil Häggbom oo ku dhaqan magaalada Istockholm ayaa ruumka mar galay isaga oo 17-jir ah. Halkaasina oo uu ku jiray muddo 10 saacadood ah.
– Waxaan ku dhowaa waali, aniga oo cabsi ballaaran ay i haysay. Caqabadda ugu wayn ee ila soo gudboonaatay ayaa ahayd inaanan cidna la hadli karin. Waxaanan ku sugnaa xaalad aad un meel iska fadhido oo aad adigu isla hadasho. Waa xaalad la oran karo jir-dil dhanka maskaxda ah, sida uu sheegay Emil Häggbom.